ကျောနံပါတ် ၇ ပေးအပ်မှုနဲ့ နိုင်ဂျီးရီးယားရဲ့ ချဉ်းကပ်မှုတွေကို တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့ ဆာကာ - Arsenal Myanmar News
အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ လူငယ်တောင်ပံကစားသမား ဘူကာယို ဆာကာက ကျောနံပါတ် ၇ ကို အသင်းက ပေးအပ်ခဲ့မှုအတွက် ဂုဏ်ယူကြောင်းနဲ့ ဒီအင်္ကျီကို ဝတ်ဆင်ကစားပြီး ရှေ့က ကစားသမားကောင်းတွေရဲ့ ခြေရာကို နင်းပြီး အသင်းရဲ့ ယုံကြည်မှုကို တုံ့ပြန်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ARSENAL MYANMAR.
အသင်းကြီးကို ကျောနံပါတ် ၈၇ နဲ့ စတင်ရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ ဆာကာဟာ ဒီရာသီမှာ ၇၇ ကို ပြောင်းလဲဝတ်ဆင်ခဲ့ပြီး ခြေစွမ်းပိုမို ကောင်းမွန်လာခဲ့သလို လာမယ့်ရာသီမှာရော တစ်လုံးတည်းဂဏန်း ၇ နဲ့ ခြေစွမ်းပြနိုင်ပါ့မလား၊ အစဉ်အလာကြီးမားတဲ့ နံပါတ်တစ်ခုရဲ့ ဖိအားများ ရှိနေမလားလို့တော့ ပရိသတ်တွေက တွေးမြင်နေကြပါတယ်။ ARSENAL MYANMAR.
ဆာကာက “ကျွန်တော် ဒီနံပါတ်ကို ရလို့ သိပ်ပြီး စိတ်လှုပ်ရှားရပါတယ်။ ဒါဟာ အာဆင်နယ်ရဲ့ ဂန္ထဝင်တွေကို ဆက်ခံပြီး သူတို့ရဲ့ သွေးတွေ စီးဆင်းနေတဲ့ အင်္ကျီထဲမှာ လိုက်ပါစီးမျောဖို့ အခွင့်ကောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနံပါတ်အတွက် တကယ်ပဲ ဂုဏ်ယူရပြီး ဒါဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာလည်း ကစားသမားကောင်းတွေ ဝတ်ဆင်နေတဲ့ နံပါတ်ဖြစ်ပါတယ်”လို့ အင်စတာဂရမ်မှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ ARSENAL MYANMAR.
အသက် ၁၈ နှစ်အရွယ် ဒီလူငယ်ဟာ နည်းပြ မီခယ်လ် အာတီတာရဲ့ အရေးပါတဲ့ ကစားသမားတစ်ယောက်လည်းဖြစ်နေပြီး သူကတော့ ဒီလိုမျိုး နံပါတ်ကို ပေးအပ်ခဲ့တဲ့ နည်းပြနဲ့ အသင်းရဲ့ ယုံကြည်မှုအပေါ် ပြန်လည်ပေးဆပ်ဖို့ အသင့်ရှိနေတယ်လို့ ပြောကြားခဲ့သလို ဒီနံပါတ်နဲ့ သူ့ရဲ့ အာဆင်နယ်သမိုင်းကိုလည်း ကိုယ်တိုင်ရေးထိုးသွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ARSENAL MYANMAR.
နိုင်ဂျီးရီးယားလက်ရွေးစင်အဖြစ် ပြောင်းလဲကစားဖို့ ကောလဟာလတွေကိုတော့ သူ့အနေနဲ့ လက်ရှိမှာ အင်္ဂလန်အသင်းတွေကိုပဲ ကိုယ်စားပြုထားကြောင်း၊ ဒါပေမယ့် မိဘတွေဘက်က နိုင်ဂျီးရီးယားသွေးဟာလည်း ရွေးချယ်ဖို့ ခက်ခဲစေတဲ့ အရာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းနဲ့ ဒီလိုမျိုး ကမ်းလှမ်းမှုတွေ ရှိနေပေမယ့် သူဟာ လူငယ်ကစားသမားတစ်ယောက်သာဖြစ်ပြီး လက်ရွေးစင်ဖြစ်ဖို့ မတန်သေးဘူးလို့ ယူဆလို့ တကယ်တမ်း မှန်ကန်တဲ့ အချိန်ကို ရောက်မှပဲ စဉ်းစားပါရစေလို့ ဆာကာက ပြောကြားသွားခဲ့တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။ ARSENAL MYANMAR.
UNICODE: အာဆငျနယျအသငျးရဲ့ လူငယျတောငျပံကစားသမား ဘူကာယို ဆာကာက ကြောနံပါတျ ၇ ကို အသငျးက ပေးအပျခဲ့မှုအတှကျ ဂုဏျယူကွောငျးနဲ့ ဒီအင်ျကြီကို ဝတျဆငျကစားပွီး ရှကေ့ ကစားသမားကောငျးတှရေဲ့ ခွရောကို နငျးပွီး အသငျးရဲ့ ယုံကွညျမှုကို တုံ့ပွနျသှားမှာဖွဈကွောငျး ပွောကွားလိုကျပါတယျ။ ARSENAL MYANMAR.
အသငျးကွီးကို ကြောနံပါတျ ၈၇ နဲ့ စတငျရောကျရှိလာခဲ့တဲ့ ဆာကာဟာ ဒီရာသီမှာ ၇၇ ကို ပွောငျးလဲဝတျဆငျခဲ့ပွီး ခွစှေမျးပိုမို ကောငျးမှနျလာခဲ့သလို လာမယျ့ရာသီမှာရော တဈလုံးတညျးဂဏနျး ၇ နဲ့ ခွစှေမျးပွနိုငျပါ့မလား၊ အစဉျအလာကွီးမားတဲ့ နံပါတျတဈခုရဲ့ ဖိအားမြား ရှိနမေလားလို့တော့ ပရိသတျတှကေ တှေးမွငျနကွေပါတယျ။ ARSENAL MYANMAR.
ဆာကာက “ကြှနျတျော ဒီနံပါတျကို ရလို့ သိပျပွီး စိတျလှုပျရှားရပါတယျ။ ဒါဟာ အာဆငျနယျရဲ့ ဂန်ထဝငျတှကေို ဆကျခံပွီး သူတို့ရဲ့ သှေးတှေ စီးဆငျးနတေဲ့ အင်ျကြီထဲမှာ လိုကျပါစီးမြောဖို့ အခှငျ့ကောငျးလညျးဖွဈပါတယျ။ ဒီနံပါတျအတှကျ တကယျပဲ ဂုဏျယူရပွီး ဒါဟာ ကမ်ဘာပျေါမှာလညျး ကစားသမားကောငျးတှေ ဝတျဆငျနတေဲ့ နံပါတျဖွဈပါတယျ”လို့ အငျစတာဂရမျမှာ ရေးသားခဲ့ပါတယျ။ ARSENAL MYANMAR.
အသကျ ၁၈ နှဈအရှယျ ဒီလူငယျဟာ နညျးပွ မီခယျလျ အာတီတာရဲ့ အရေးပါတဲ့ ကစားသမားတဈယောကျလညျးဖွဈနပွေီး သူကတော့ ဒီလိုမြိုး နံပါတျကို ပေးအပျခဲ့တဲ့ နညျးပွနဲ့ အသငျးရဲ့ ယုံကွညျမှုအပျေါ ပွနျလညျပေးဆပျဖို့ အသငျ့ရှိနတေယျလို့ ပွောကွားခဲ့သလို ဒီနံပါတျနဲ့ သူ့ရဲ့ အာဆငျနယျသမိုငျးကိုလညျး ကိုယျတိုငျရေးထိုးသှားမယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ARSENAL MYANMAR.
နိုငျဂြီးရီးယားလကျရှေးစငျအဖွဈ ပွောငျးလဲကစားဖို့ ကောလဟာလတှကေိုတော့ သူ့အနနေဲ့ လကျရှိမှာ အင်ျဂလနျအသငျးတှကေိုပဲ ကိုယျစားပွုထားကွောငျး၊ ဒါပမေယျ့ မိဘတှဘေကျက နိုငျဂြီးရီးယားသှေးဟာလညျး ရှေးခယျြဖို့ ခကျခဲစတေဲ့ အရာတဈခုဖွဈကွောငျးနဲ့ ဒီလိုမြိုး ကမျးလှမျးမှုတှေ ရှိနပေမေယျ့ သူဟာ လူငယျကစားသမားတဈယောကျသာဖွဈပွီး လကျရှေးစငျဖွဈဖို့ မတနျသေးဘူးလို့ ယူဆလို့ တကယျတမျး မှနျကနျတဲ့ အခြိနျကို ရောကျမှပဲ စဉျးစားပါရစလေို့ ဆာကာက ပွောကွားသှားခဲ့တယျလို့ သိရှိရပါတယျ။ ARSENAL MYANMAR.
By AM Author| 2020-07-25T17:13:43+00:00	July 25th, 2020|News|Comments Off on ကျောနံပါတ် ၇ ပေးအပ်မှုနဲ့ နိုင်ဂျီးရီးယားရဲ့ ချဉ်းကပ်မှုတွေကို တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့ ဆာကာ